Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy vita indray andro | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy vita indray andro
Rehefa mamely mafy toy izao ny korontan’ny tontolo voajanahary dia mivandravandra daholo ny fery eto amin’ny fiaraha-monina. Am-polony ny olona namoy ny ainy, an’alina ireo tra-boina namoy ny kely noheveriny mba ho fananany. Mientana ny mpiray tanindrazana samy manao izay kely vitany ao anatin’ny firaisan-kina. Tsy gisitra amin’izany ny mpanao pôlitika na rizareo eo amin’ny fitondrana na ireo any amin’ny fanoherana. Tsy tapitra ho enjehina indray andro daholo anefa ny famonjena ireo niharam-boina. Tsy indray andro koa moa fa efa ela izay no niviraviran’ny fahasahiranana azy ireny. Ny fery no miseho fa ny aretina efa ela no nikotrika teto amin’ny fiarahamonina nahatonga ny mponina ho trotraka sy farofy toy izao.
Ny fery moa no mahamaika, fa ny aretimbe rafahantrana tsy hay akisoka. Vonjy tavan’andro fotsiny anefa raha mbola tsy ny fahantrana fa ny fiantrana no atao vain-dohandraharaha. Impiry impiry moa no nahenoana an’ireo tompon’andraikitra ambony nanainga ny vahoaka hiara-hisikina ao anatin’ny ezaka fampandrosoana izay tsy vitan’ny fanjakana irery ? Amin’ny fanaovana ezaka ahavita dingana firy anefa ireto mponina tsy miainga akory dia efa reraka tototry ny fahasahiranana, ramaka tsy ampy ho hanina ? Tsy fanentanana sy fitarihan-dàlana fotsiny anie no adidin’ny mpitondra, fa ny fametrahana sy ny fanajariana rafitra ahafahan’ny maro mihiratra sy mijoro ao anatin’ny fihajana amin’ny maha olombelona.
Tsy famporisihana hampisara-bazana ny manana sy ny ory sanatria, raha alalinina dia miray hina ireo sokajy ireo noho ny tsy maintsy fiarahany monina. Iaraha-mahafantatra moa fa eto an-tany samy manana ny vintany ka tsy izay no atao hampisaraka, fa ny olo-marina rehetra kosa dia samy miandrandra ny rariny eo amin’ny fahafahana sy fitoviana zo eo anivon’ny fiaraha-monina.
Ny tsy fitoviana fananana no azo ekena, nefa raha mijery tsy miangatra maro ireo manantena fahazoana sy fisitrahana tombony eo amin’ny fahafahana manao sy fananana zo ambonin’ny rehetra. Tsy ny mponina anie no may antoka amin’izao resaka lasa aloha mikasika ny fifidianana izao. Izao dia samy mijery ny rehetra, tazany avokoa ireo manjakazaka sy be hetraketraka noho ny fananany harena na noho ny fahefana eo am-pelatanany. Any anatin’ny vata fandatsaham-bato ny kizo iandrasan’ny olona azy ireny.